बरु काँग्रेस छाडिन्छ,राष्ट्रियतामाथिको प्रहार सहन्नँ - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १२ श्रावण २०७३, बुधबार ०५:४६ |
अब बन्ने नयाँ सरकारमा काँग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व विमलेन्द्र निधिले गर्ने लगभग पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।
सबैलाई थाहा छ पार्टीको दोस्रो दर्जामा रहेका निधिले रातारात यस्तो योग्यता कसरी र कहाँबाट हासिल गरे । भारतसँग केपी ओली सरकार गिराउँन दलाली गरेबापात उनले दिल्लीबाट बक्सिसस्वरुप यस्तो योग्यता पाएका हुन् भन्नेमा अब प्रष्ट भैसकेको छ ।
अहिले हल्लाको रुपमा मात्र रहेको यो कुरा यदि सत्य साबित भयो भने देशका लागि केहि गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेका म जस्ता युवाहरु काँग्रेसले गुमाउँनेमा कुनै शंका छैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कानसम्म यो कुरा पुग्न आवश्यक छ ।
म जन्मजात काँग्रेस भएको होइन,न कि बाबुको बींडो थाप्न काँग्रेस बनेको हूँ । काँग्रेसले बोकेको सिद्दान्त र बिचारले मात्र नेपालको समृद्धि सम्भव छ भन्ने बुझेर स्वविवेकले काँग्रेस प्रति झुकाव राखेको हूँ । तर काँग्रेसको पछिल्लो गतिविधिहरुले राष्टप्रेमी म जस्ता समर्थकहरुलाई सशंकित पार्ने काम गरेको छ । यदि अब काँग्रेसले आफ्नो राष्ट्रियताको नीतिलाई सत्तासँग साटेर भारतीय दलालसँग सम्झौता गर्दछ भने काँग्रेसको पक्षमा बहस गर्न मसँग कुनै आधार र शब्द बाँकी रहनेछैन । त्यसैले अझै पनि समय बाँकी छ, काँग्रेसको नेतृत्वहरु सजग बन्न । केही नेताहरुका कारणले यति लामो र गौरवमय ईतिहास बोकेको काँग्रेस पार्टीको साखलाई धुलोमा मिलाउन नदिऔं ।
फेरि दोहोर्याउँछु “म कसैको गोठालो होईन र हरेक गलत कामको खिलाफ चट्टान बनेर उभिन्छु,बिरोध गर्छु“ । किनकि म एक चेतनशील नेपाली युवा हूँ र देश बनाउने दम राख्छु ।
काँग्रेसको पछिल्लो गतिविधिहरुले राष्टप्रेमी म जस्ता समर्थकहरुलाई सशंकित पार्ने काम गरेको छ । यदि अब काँग्रेसले आफ्नो राष्ट्रियताको नीतिलाई सत्तासँग साटेर भारतीय दलालसँग सम्झौता गर्दछ भने काँग्रेसको पक्षमा बहस गर्न मसँग कुनै आधार र शब्द बाँकी रहनेछैन ।
Previousन्यायाधीश पदमा प्रस्तावितहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ
Nextअष्ट्रेलियामा न्याभले ‘तीज मेला’ गर्ने,कोमल वलीले नचाउँने
क्रिसमस किन मनाइन्छ ?
१० पुष २०७२, शुक्रबार ०३:३१
निर्वाचन नहुँदै विजयी रञ्जु दर्शना
२३ बैशाख २०७४, शनिबार ०२:०८
यसरकारण मोदी र भारत सरकार धन्यवादका पात्र छन् !
१२ आश्विन २०७२, मंगलवार १७:३८
होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो अन्नाका मजदुर र कर्मचारी आन्दोलित
तेरिया मगर नेपाली फिल्ममा अनुबन्धित,कोसँग गर्दैछिन् रोमान्स ?
ट्रम्पको निर्वाचन अध्यक्ष मानाफोर्ट नजरबन्दमा